Kurwa Kwakanaka Here? Batsirai Vana Kuti Vatambe Nevamwe Zvakanaka
PANE vakomana kana kuti vasikana vaunoziva vanodenha vamwe here?— Unofarira kutamba navo here? Kana kuti ungada zvako kuva nomumwe munhu ane mutsa anoda zvorunyararo?— Mudzidzisi Mukuru akati: “Vanofara vanoita rugare, sezvo vachanzi ‘vanakomana vaMwari.’”—Mateu 5:9.
Asi dzimwe nguva vamwe vanhu vanoita zvinhu zvinotigumbura. Hachisi chokwadi here ichocho?— Naizvozvo tinganzwa kuda kudzorera. Izvi zvakamboitika kuvadzidzi vaJesu pavakanga vachifamba naJesu vachienda kuJerusarema. Rega ndikuudze nyaya yacho.
Pavakanga vati fambei, Jesu akatumira vashomanana vevadzidzi vake mberi mumusha weSamariya kuti vanotsvaka nzvimbo yokuzororera. Asi vanhu veko vakanga vasingadi kuti vagare, sezvo vaSamariya vaiva nemanamatiro akanga akasiyana neavo. Uye vakanga vasingadi munhu aienda kunonamatira muguta reJerusarema.
Jakobho naJohani vakanga vachida kuitei kuti vatsive vaSamariya?
Dai izvozvo zvakanga zvaitika kwauri, waidai wakaitei? Ungadai wakatsamwa here? Ungadai wakada kuvadzorerawo here?— Ndizvo zvaida kuitwa nevadzidzi Jakobho naJohani. Vakati kuna Jesu: ‘Munoda kuti titaurire moto ubve kudenga uuye pasi kuzovaparadza here?’ Ndosaka Jesu akavati Vanakomana Vemabhanan’ana! Asi Jesu akavaudza kuti zvakanga zvisina kunaka kuitira vamwe vanhu izvozvo.—Ruka 9:51-56; Mako 3:17.
Ichokwadi kuti dzimwe nguva vanhu vangatiitira utsinye. Vamwe vana vangaramba kuti titambe navo mitambo yavo. Vangatotaura kuti: “Hatidi kukuona pano.” Apo chimwe chinhu chakadaro chinoitika, zvingatigumbura, handiti? Tinganzwa tichida kuita chimwe chinhu kuti titsive. Asi tinofanira kudaro here?—
Wadii kutora Bhaibheri rako? Ngativhure pana Zvirevo chitsauko 24, ndima 29. Ipapo panoti: “Usati: Sezvaakandiitira, ndizvo zvandichamuitirawo; ndicharipira munhu sezvaakaita iye.”
Izvozvo zvinorevei kwauri?— Pari kuti, hatifaniri kuedza kutsiva. Hatifaniri kuitira munhu utsinye pamusana pokungoti atiitira utsinye. Asi zvakadini kana mumwe munhu akakudenha achida kurwa newe? Angaedza kukutsamwisa nokukutsvinyira. Angakuseka achiti unotya. Ngatitii akuti uri gwara. Unofanira kuitei? Unofanira kurwira izvozvo here?—
Ngatione zvakare zvinotaurwa neBhaibheri. Vhura pana Mateu chitsauko 5, ndima 39. Ipapo Jesu anoti: “Musadzivisa akaipa; asi munhu wose anokurova nembama padama rako rorudyi, umutendeutsire rimwewo.” Unofunga Jesu airevei nemashoko iwayo? Aireva here kuti kana mumwe munhu akakurova nechibhakera chake kudivi rimwe rechiso chako, unofanira kumurega achikurova kune rimwe racho?—
Aiwa, Jesu akanga asingarevi izvozvo kana. Mbama haina kufanana nokurova nechibhakera. Yakada kufanana nokusundidzira. Munhu angatirova mbama kutidenha kuti tigorwa naye. Anoda kuti tigumbuke. Uye kana tikagumbuka uye tosundidzirawo, chii chinoitika?— Zvimwe tinobva tatanga kurwa.
Asi Jesu akanga asingadi kuti vateveri vake varwe. Naizvozvo akataura kuti kana mumwe munhu akatirova nembama, hatifaniri kumurovawo. Hatifaniri kugumbuka tozoguma tarwa nomunhu. Kana tikadaro, tinoratidza kuti hatina kusiyana neatanga zvokurwa.
Kana zvinetso zvikatanga, unofunga chinhu chakanaka chokuita chii?— Kubva panzvimbo yacho. Munhu wacho angakusundidzira zvekare. Asi pamwe zvinobva zvaperera ipapo. Paunobva uchienda hako, hazvirevi hazvo kuti hauna simba. Zvinoreva kuti wakaomerera zvakasimba pane zvakanaka.
Tinofanira kuitei kana mumwe munhu akatidenha achida kurwa nesu?
Asi zvakadini kana ukarwa ndokukurira? Chii chingaitika?— Waunorova wacho anogona kudzoka ave neshamwari dzake. Vanogona kutokukuvadza netsvimbo kana kuti nebanga. Saka unoona here zvino chikonzero nei Jesu akanga asingadi kuti tirwe?—
Tinofanira kuitei kana tikaona vamwe vanhu vachirwa? Tinofanira kutsigira rimwe divi here?— Bhaibheri rinotiudza zvakanaka. Vhura pana Zvirevo chitsauko 26, ndima 17. Panoti: “Somunhu unobata imbwa nenzeve dzayo, ichingopfuura hayo, ndizvo zvakaita munhu unozvipinza pagakava raasina mhosva naro.”
Ko kupindira pane vanhu vari kurwa kwakafanana nokubata nzeve dzeimbwa pakudii? Unokuvadzwa, usazviita!
Chii chingaitika kana ukabata nzeve dzembwa? Imbwa inorwadziwa, yokuruma, handiti? Imbwa ingaedza kuzvisunungura, iwe wobva wabatisisa nzeve dzacho iyo yobva yawedzerawo kupenga. Kana ukairega, pamwe ichakuruma chaizvo. Asi ungangomira here ipapo wongoramba wakabata nzeve dzayo?—
Iroro ndiro dambudziko ratinozvipinza mariri kana tikapindira vamwe vanhu vachirwa. Tingasaziva kuti ndiani atanga kudenha mumwe kana kuti vari kurwirei. Mumwe munhu angave ari kurohwa, asi pamwe abira munhu wacho. Kana tikamubatsira, tinenge tichibatsira mbavha. Izvozvo zvingasava zvakanaka, handitika?
Saka unofanira kuitei kana ukaona vanhu vachirwa?— Kana pari pachikoro, unogona kumhanya wonoudza mumwe wevadzidzisi. Kana pasiri pachikoro unogona kudana mumwe wevabereki vako kana kuti mupurisa. Hungu kunyange apo vamwe vanhu vanenge vachida kurwa, tinofanira kutsvaka rugare.
Unofanira kuitei ukaona vanhu vachirwa?
Vadzidzi vaJesu vechokwadi vanoita zvose zvavanogona kuti vasarwa. Nenzira iyi tinoratidza kuti takaomerera zvakasimba pane zvakanaka. Bhaibheri rinotaura kuti mudzidzi waJesu “haafaniri kurwa, asi anofanira kuva munyoro kune vose.”—2 Timoti 2:24.
Zvino ngatitarise mamwe mazano akanaka achatibatsira kuti tisarwa nevanhu: VaRoma 12:17-21; na1 Petro 3:10, 11.
Mazano omuBhaibheri ari kubatsira vanhu vaimbovengana kuti vataurirane vobva vazova shamwari, tsika nditsike chaiye.